कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष ! – Everest Dainik – News from Nepal
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष !
काठमाडौं, असार २५ । सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाशको उमेर २ वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
अर्थले निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको केही सुविधा पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहमति दिने क्रममा मन्त्रालयले सुविधाहरू कटौतीको प्रस्ताव गरेको हो । ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सुझाब र सहमति कायम रहेमा कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा कडाइ हुनेछ । अर्थले निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पेन्सन सुविधा पाउने प्रावधान अघि सारेको हो । उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्मचारीले ५५ वर्षमै राजीनामा दिए पनि पेन्सन खान थप ५ वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले २० वर्ष जागिर गरेर राजीनामा दिएपछि लगत्तै पेन्सन सुविधा पाउँदै आएका छन् । अनिवार्य अवकाशको उमेरभन्दा पहिले नै सचिव भएर अवकाश पाए सोही मितिबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने सहमति अर्थले दिएको छ । पेन्सन सुविधामा राज्यकोषमा बढ्दै गएको भार व्यवस्थापन गर्ने ढंगले सुझाब दिएको अर्थको तर्क छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले विषयगत क्षेत्रमा आफ्नो राय दिए पनि त्यसको छिनोफानो संसद्ले गर्ने भएकाले टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Abkas 60, karmachari, अवकाश ६० वर्ष